ရေနံလုပ်ကွက်များတွင် မြေထောက်ခအခွန် အဆ ၁ဝဝ တက်သွားသည့်အတွက် ရေနံလုပ်ငန်းရှင်များ အဆင်မပြေ - Yangon Media Group
မကွေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၂
ရေနံ လုပ်ကွက်များတွင် မြေထောက်ခ အခွန် အဆ ၁ဝဝ တက်သွားသည့် အတွက် ရေနံလုပ်ငန်းရှင်များ အဆင်မပြေမှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေ ရကြောင်း ရေနံလုပ်ငန်းရှင်များထံ မှ သိရသည်။ ရေနံလုပ်ကွက်များအတွက် ယခင်က ရေနံလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ သည် အစိုးရထံတွင် တစ်ဧက ကျပ် ၃ဝဝဝ အခွန်ဆောင်၍ လုပ်ခဲ့ကြ ရသော်လည်း ၂ဝ၁၈ခုနှစ် ဒီဇင် ဘာလမှ စတင်ကာ တစ်ဧက ကျပ် ၃ဝဝဝဝဝ ကောက်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ သဖြင့် ရေနံလုပ်ငန်းရှင်များအ ဆင်မပြေမှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဘယ်လိုအဆင်မပြေတာ လဲဆိုတော့ အရင်က ဧက ၂ဝဝ အစ်မကလုပ်တယ်။ ဧက ၂ဝဝ ကို မြေခွန်သွင်းရတဲ့ ငွေကျပ်ခြောက် သိန်းပဲ သွင်းရတယ်။ အခုသိန်း ခြောက်ရာသွင်းရမယ်ဆိုတော့ မသွင်းနိုင်တော့ပါဘူး”ဟု ရေနံလုပ် ငန်းရှင် မသီတာဦးကပြောသည်။ ရေနံလုပ်ကွက်များတွင် ကောက်ခံသည့် မြေထောက်ခ အခွန် အဆ ၁ဝဝ တက်သွားသည့် အတွက် ရေနံလုပ်ငန်းရှင်များအနေ နှင့် ယခင်လျှောက်ထားလုပ်ကိုင်ခဲ့ သည့် မြေများကို လျှော့ချလုပ်ကိုင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ”မြေထောက်ခအခွန်တွေ တက်သွားတဲ့အတွက် အစ်မတို့က အရင်က လေးဦးစပ်ကို ဧက၃၅ဝ လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ အခုဧက ၂ဝ ပဲ လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် အသနားခံစာ တင်ပြထားပါတယ်”ဟု မင်းလှ မြို့နယ် ရွှေတောင်တန်းရေနံ အသင်းအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်မြမြမင်းက ပြောသည်။
တပ်မတော်အစိုးရလက် ထက် ရေနံလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက် ၍ မည်သည့်အခွန်မှ မကောက် ခံခဲ့ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်အစိုးရ လက်ထက်၌ ရေနံလုပ်ကွက်များ တွင် မြေထောက်ခအခွန် တစ် ဧက ကျပ် ၃ဝဝဝ ကောက်ခံခဲ့ ကြောင်း၊ ၂ဝ၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ မှစ၍ ရေနံလုပ်ကွက်များတွင် မြေထောက်ခအခွန် တစ်ဧက ကျပ် ၃ဝဝဝဝဝ ကောက်ခံရန် အတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ သယံဇာတသဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဦးမြင့်ဇော်က ပြောသည်။
”တစ်ဧက ကျပ် ၃ဝဝဝဝဝ နှုန်းကောက်တဲ့အတွက် အရင်ကလို မြေနေရာတွေလျှောက်ပြီး ဦးတဲ့သူ တွေမရှိတော့ဘူး။ အမှန်တကယ် တူးတဲ့လူတွေပဲ လုပ်ကိုင်နိုင်တော့ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခွန်ငွေတွေ လည်း တိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အတွက် မနစ်နာစေချင် တဲ့အတွက်ပါ ပြည်ထောင်စုအစိုး ရနဲ့ ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ် ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင် ၁ဝဦးခန့် က ဧကလျှော့လုပ်ခွင့်တင်ပြထား ပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်လို့မရပါဘူး။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေအရ အကုန် ပြန်အပ်ပြီးမှ ပြန်လျှောက်ထားရ မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ¤င်းကပြော သည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရေနံလက်ယက်တွင်းတိမ်လုပ် ကွက်ပေါင်း ၃၁ ကွက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ-ထိုင်းအမှတ် (၂)ချစ်ကြည်ရေး တံတား၌ တရားမဝင်မြန်မာလုပ်သား ၁၅ ဦးနှင့် ကလေးငယ်နှစ်ဦးတ??
Insidious :The Last Key Chapter (၄) ပြသအောင်ပွဲခံ
ချင်းပြည်နယ်တွင် ပြည်တွင်း ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဖိတ်ခေါ်၍ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း??
ကိတ်ဘလန့်ချက်ကို တိတ်တခိုး ချစ်ကြိုက်ခဲ့ဖူးဟု အော်လန်ဒိုဘလူးမ် ဝန်ခံ
မန္တလေးမြို့မှ ပုလင်း ပန်းချီဆရာတစ်ဦး ၂၉ လက်မ လုံးပတ်ရှိ ပုလင်းအတွင်း၌ ခေတ်လေးခေတ်ကို ပုံေ?